Fanaa  | MM Movie Store
ဘောလီဝုဒျရဲ့ ခနျး(မျ) ၃ ခနျး(မျ)ထဲက နာမညျကွီး တဈယောကျဖွဈတဲ့ အမီးရျခနျး(မျ)နဲ့ အခုခြိနျထိ ခြောဆဲ လှဆဲမငျးသမီးတဈလကျဖွဈတဲ့ ကာဂြိုလျတို့က ပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ ကားကောငျးတကားလညျး ဖွဈပါတယျ..သူ့ခတျေသူ့အခါမှာ နာမညျကွီး အောငျမွငျမှုတှရေခဲ့တဲ့အပွငျအခုထိလညျး လူကွိုကျမြားဆဲ ဇာတျကားကောငျး တဈကားဖွဈပါတယျ…
ဇာတျဝငျတေးခြိုခြိုလေးတှေ၊မှိနျ့မေားစရာ နောကျခံတေးဂီတ ၊ရိုကျကှငျးရှု့ခငျး ခပျလှလှလေးတှနေဲ့ ဆှေးစရာ၊ လှမျးမောစရာကွညျနူးစရာ အခဈြဇာတျကားကောငျးလေး တဈကားလညျး ဖွဈပါတယျ…
ဆုတှအေနနေဲ့လညျး ဘောလီဝုဒျရဲ့ အကွီးမားဆုံးဆုပေးပှဲတဈခုဖွဈတဲ့Filmfare Awards မှာBest Actor (female) အဖွဈ ကာဂြိုလျBest Playback Singer (Male) အဖွဈ ShaanBest Lyrics အဖွဈ Parsoon JoshiZee Cine Awards မှာလညျးBest Actor (female) အဖွဈ ကာဂြိုလျ
Best Playback Singer အဖွဈ Shaan တို့နဲ့Screen Awards (2006) မှာBest Playback Singer အဖွဈ Shaanစသဖွငျ့ ဆုပေါငျးမြားစှာရရှိခဲ့ပါတယျ…ရိုမှရိုခငျြတဲ့သူတှေ ကွညျ့လိုကျကွပါဗြာ …. အကွိုကျတှစေ့ရေမယျဆိုတာ ရဲရဲကွီး အာမခံပါတယျ
ဇူနီဆိုတဲ့မကျြမမွငျမလေးဟာ သူငယျခငျြးတှနေဲ့အတူ ကရျှမီးကိုယျစားပွုလှပျလပျရေးနအေ့ခမျးအနားအတှကျ ကပွဖြျောဖွဖေို့ ဒလေီကို သှားခဲ့ပါတယျ…ဒလေီရောကျတော့ ရီဟနျဆိုတဲ့ ဧညျ့လမျးညှနျတဈယောကျနဲ့ ဆုံခဲ့ပါတယျ
မကျြမမွငျ ဇူနီအတှကျ ရီဟနျ ရဲ့ပုံသဏ်ဍနျကို သူငယျခငျြးတှဆေီမေးခဲ့တယျ… သူငယျခငျြးတှေ ပွောပွသလောကျ ရုပျရညျခြောမောပွီးကဗြာတှစောတှဖှေဲ့နှဲ့တတျတဲ့ မိနျးကလေးတိုငျးကွှဆေငျးလောကျသူ…ရှရှေညျမှာ အဆငျမပွဘေူးထငျပွီး သူငယျခငျြးတှကေ ဇူနီရဲ့ ယိုငျနဲ့နတေဲ့ခံစားခကျြကိုသိလို့တားခဲ့ကွတယျ…
သူငယျခငျြးတှတေားတဲ့ကွားထဲက ရီဟနျကိုခဈြမိသှားခဲ့ပါတယျ…“မိနျးကလေးဆိုတာ ငါ့အတှကျမွို့တှလေိုပဲမွို့တမွို့ကိုသှားလိုကျတယျ အကြှမျးတဝငျဖွဈသှားရငျနောကျတမွို့ကို ပွောငျးသှားလိုကျတယျငါ့အနားကိုမလာပါနဲ့ ဇူနီ … ဒီမုနျတိုငျးက မငျးဘဝကိုဖကျြစီးပဈလိုကျလိမျ့မယျ”
ဒါကတော့ အခဈြကိုအယုံအကွညျမရှိ တဲ့ ရီဟနျရဲ့ အယူအဆတှပေါဝငျတဲ့ ပွောစကားပါပဲ..ကိုငျးသူတို့ အဆငျပွမေလား…ဘာတှဆေကျဖွဈမလဲ ဆိုတာကိုတော့ခံစားကွညျ့လိုကျပါဦးဗြို့
ဘောလီဝုဒ်ရဲ့ ခန်း(မ်) ၃ ခန်း(မ်)ထဲက နာမည်ကြီး တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အမီးရ်ခန်း(မ်)နဲ့ အခုချိန်ထိ ချောဆဲ လှဆဲမင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ ကာဂျိုလ်တို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ကားကောင်းတကားလည်း ဖြစ်ပါတယ်..သူ့ခေတ်သူ့အခါမှာ နာမည်ကြီး အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့တဲ့အပြင်အခုထိလည်း လူကြိုက်များဆဲ ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်…
ဇာတ်ဝင်တေးချိုချိုလေးတွေ၊မှိန့်မေားစရာ နောက်ခံတေးဂီတ ၊ရိုက်ကွင်းရှု့ခင်း ခပ်လှလှလေးတွေနဲ့ ဆွေးစရာ၊ လွမ်းမောစရာကြည်နူးစရာ အချစ်ဇာတ်ကားကောင်းလေး တစ်ကားလည်း ဖြစ်ပါတယ်…
ဆုတွေအနေနဲ့လည်း ဘောလီဝုဒ်ရဲ့ အကြီးမားဆုံးဆုပေးပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့Filmfare Awards မှာBest Actor (female) အဖြစ် ကာဂျိုလ်Best Playback Singer (Male) အဖြစ် ShaanBest Lyrics အဖြစ် Parsoon JoshiZee Cine Awards မှာလည်းBest Actor (female) အဖြစ် ကာဂျိုလ်
Best Playback Singer အဖြစ် Shaan တို့နဲ့Screen Awards (2006) မှာBest Playback Singer အဖြစ် Shaanစသဖြင့် ဆုပေါင်းများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်…ရိုမှရိုချင်တဲ့သူတွေ ကြည့်လိုက်ကြပါဗျာ …. အကြိုက်တွေ့စေရမယ်ဆိုတာ ရဲရဲကြီး အာမခံပါတယ်
ဇူနီဆိုတဲ့မျက်မမြင်မလေးဟာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ကရ်ှမီးကိုယ်စားပြုလွပ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားအတွက် ကပြဖျော်ဖြေဖို့ ဒေလီကို သွားခဲ့ပါတယ်…ဒေလီရောက်တော့ ရီဟန်ဆိုတဲ့ ဧည့်လမ်းညွှန်တစ်ယောက်နဲ့ ဆုံခဲ့ပါတယ်
မျက်မမြင် ဇူနီအတွက် ရီဟန် ရဲ့ပုံသဏ္ဍန်ကို သူငယ်ချင်းတွေဆီမေးခဲ့တယ်… သူငယ်ချင်းတွေ ပြောပြသလောက် ရုပ်ရည်ချောမောပြီးကဗျာတွေစာတွေဖွဲ့နွဲ့တတ်တဲ့ မိန်းကလေးတိုင်းကြွေဆင်းလောက်သူ…ရှေရှည်မှာ အဆင်မပြေဘူးထင်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေက ဇူနီရဲ့ ယိုင်နဲ့နေတဲ့ခံစားချက်ကိုသိလို့တားခဲ့ကြတယ်…
သူငယ်ချင်းတွေတားတဲ့ကြားထဲက ရီဟန်ကိုချစ်မိသွားခဲ့ပါတယ်…“မိန်းကလေးဆိုတာ ငါ့အတွက်မြို့တွေလိုပဲမြို့တမြို့ကိုသွားလိုက်တယ် အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်သွားရင်နောက်တမြို့ကို ပြောင်းသွားလိုက်တယ်ငါ့အနားကိုမလာပါနဲ့ ဇူနီ … ဒီမုန်တိုင်းက မင်းဘဝကိုဖျက်စီးပစ်လိုက်လိမ့်မယ်”
ဒါကတော့ အချစ်ကိုအယုံအကြည်မရှိ တဲ့ ရီဟန်ရဲ့ အယူအဆတွေပါဝင်တဲ့ ပြောစကားပါပဲ..ကိုင်းသူတို့ အဆင်ပြေမလား…ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ ဆိုတာကိုတော့ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦးဗျို့
9-1-1 (Season 3) ၊ အပိုငျး (၄)